एक साता कपिलवस्तु सिल गर्ने प्रशासनको निर्णय – Tahalka Nepal
Tahalka Nepal / समाचार / समाज / एक साता कपिलवस्तु सिल गर्ने प्रशासनको निर्णय
एक साता कपिलवस्तु सिल गर्ने प्रशासनको निर्णय
. २०७७ बैशाख २९, सोमबार १६:२४ गते
एकैदिन कोरोनाका नयाँ १० जना संक्रमित थपिएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कपिलवस्तुलाई सिल गर्ने निर्णय गरेको छ।
कोरोनाका संक्रमित थपिँदै गए पनि भारतमा रहेकाहरू सीमानाकाबाट आउने क्रम नरोकिएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले जिल्लालाई सिल गर्ने निर्णय गरेको हो।
कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले सोमबार साँझ ५ बजेदेखि जेठ ५ गते राति १२ बजेसम्म लागू हुने गरी सिल गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले जिल्लामा कोरोनाका थप संक्रमण नफैलियोस् र यसअघि बाहिरबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित गर्न सकियोस् भनी जिल्लालाई एक साता सिल गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
जिल्ला सिल गरिएसँगै अत्यावश्यक सेवाका बाहेक अब कुनै पनि व्यक्तिलाई जिल्लाबाट बाहिर जान र जिल्ला प्रवेश गर्न रोक लगाइने छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले सीमा नाकामा थप कडाइ गर्दै जिल्लाभित्र समेत आवतजावतलाई पूर्णरूपमा रोक लगाएर सिल गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
सोमबार कपिलवस्तुमा थप भएका कोरोनाका संक्रमित सबै पछिल्लो दस दिनको बीचमा भारतबाट आएका हुन्।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीका अनुसार संक्रमित सबै भारतको महाराष्ट्रबाट लुकिछिपी नेपाल आएका हुन्।
उनीहरूमध्ये यशोधरा गाउँपालिकास्थित अनिरूद्र माध्यमिक विद्यालय बैदौलीमा रहेको क्वारेन्टाइनमा ७ जना, पशुपति शिक्षा मन्दिर सुठौलीको क्वारेन्टाइनमा १ जना र बुद्धभूमि नगरपालिकाको गौतमबुद्ध माविको क्वारेन्टाइनमा २ जना रहेका थिए।
यसअघि मायादेवी गाउँपालिकामा ४ जना र शुद्धोधन गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए। यीसँगै कपिलवस्तुमा मात्रै संक्रमितको संख्या १५ पुगेको छ।
उनीहरू सबै जनालाई थप उपचारको लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले बुटवलमा सञ्चालन गरेको कोरोना विशेष अस्पतालमा ल्याइएको छ ।
सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका १० जना पछिल्लो १० दिनको अवधिमा भारतको मुम्बईबाट कपिलवस्तु आएका हुन्। संक्रमण पुष्टि भएका सबै पुरूष हुन्। उनीहरू १८, १९,२४, ३०, ३१ वर्षका एक/एक जना तथा २० र ३४ वर्षका दुई/दुई जना रहेका छन्। एक जनाको भने उमेर खुलेको छैन।
सीमा नाकाबाट लुकिछिपी गाउँ आएको थाहा पाएपछि स्थानीयवासीको सहयोगमा गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो।
गाउँपालिकास्थित अनिरूद्र मावि बैदौली र पशुपति शिक्षा मन्दिर सुठौलीमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा रहेका उनीहरूको २७ गते स्वाब संकलन गरी परीक्षणको लागि लगिएको थियो।
२७ गते बुद्धभूमि र यशोधराका तीन वटा क्वारेन्टाइनबाट मात्रै २ सय ९९ जनाको स्वाब परीक्षणको लागि पठाइएकोमा ९९ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा १० जनामा कोरोना पोजेटिभ पाइएको हो। बाँकी दुई सय जनाको संकलित स्वाब परीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोद गिरीले २७ गते मात्रै कपिलवस्तुबाट ४ सय ५३ जनाको स्वाब संकलन गरिएको जानकारी दिए।
डा. गिरीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट एकै दिन ३ हजार ८८ जनाको स्वाब संकलन गरिएको जानकारी दिए।
संकलन गरिएको स्वाबमध्ये १ हजार ३ सय ८५ नमूना केन्द्रीय प्रयोगशाला टेकुमा पठाइएको छ भने ११ सय ५४ नमूना बाँके र गण्डकी प्रदेशमा रहेका प्रयोगशालामा पठाइएको डा. गिरीले जानकारी दिए।
भैरहवास्थित प्रयोगशालामा ५ सय ४९ नमूना परीक्षणको लागि राखिएको डा. गिरीले जानकारी दिए ।
आइतबारसम्म कपिलवस्तु जिल्लामा रहेका विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा एक हजार दुई सय ४४ जना राखिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समेत लकडाउनको अवधिमा सीमा क्षेत्रबाट गाउँमा कति मानिस प्रवेश गरे भन्ने यकिन तथ्यांक छैन।
कपिलवस्तुको भारतीय सीमातर्फ आइबारसम्म झण्डै दुई हजार व्यक्ति अलपत्र अवस्थामा रहेको स्थानीय प्रशासनको भनाइ छ। त्यसमध्ये केही व्यक्तिहरू आइतबार राति नै नेपाल प्रवेश गरेको स्थानीयवासीको भनाइ रहेको छ।
कपिलवस्तुका प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले पछिल्लो चार दिनको अवधिमा मात्रै जिल्लाका विभिन्न नाकाबाट ११ सयभन्दा बढी व्यक्ति लुकिछिपी जिल्ला प्रवेश गरेको दाबी गरे।
सहायता समाग्री सहित चीनयाँ जनमुक्ति सेनाको विमान काठमाण्डौ आउने